Tilmaamaha iyo Tilmaamaha lagu qoro Warqad Iscasilaad Iskaa ah | Dhaqaalaha
Warqad iscasilaad ikhtiyaari ah
Susana Maria Urbano Mateos | | Shaqada
Sababo kala duwan awgood, waxaa macquul ah in mar uun aad isku aragto inaad iska casisho shaqo shirkadeed; tan awgeed waxay lagama maarmaan u tahay inaad soo bandhigto a warqad iscasilaad ikhtiyaari ah, Marka la soo koobo, waa dukumiinti aad ku ogeysiineyso ka noqosho ikhtiyaari ah ururka.
Marka xigta, waxaan sharxi doonaa wax badan oo ku saabsan waxa uu yahay warqada iscasilaadda iskeed ah, iyo sida saxda ah ee loo qoro.
1 Goorma ayaa la isticmaalaa warqad iscasilaad ikhtiyaari ah?
2 Qor warqaddaada ka noqoshada ikhtiyaariga ah
3 Nuxurka warqadda
5 Cinwaanka cinwaanka
6 Xiriir afka ah habka joojinta ikhtiyaariga ah
6.1 Si aad u diyaariso bixitaankaaga waa inaad tixgelisaa 4-ta qodob ee soo socda:
Goorma ayaa la isticmaalaa warqad iscasilaad ikhtiyaari ah?
Warqadda Waa qalab loo isticmaalo marka aad rabto inaad ka tagto shaqadaada, sababtuna waxa weeye inaadan jeclayn deegaanka shaqada ama inaad heshay shaqo faa'iidooyin fiican leh.
Marka talada ugu horreysa ee aan ku siin karno waxay tahay in go’aanka iscasilaadda ay tahay in si fiican looga fikiro, waana inaad miisaamtaa. faa'iidooyinka iyo khasaaraha.
Haddii aad qaadatay go'aankan, waa inaad tan ka faa'iideysataa warqad iscasilaad ikhtiyaari ah, hada waxaad baran doontaa sida loo qoro.
Qor warqaddaada ka noqoshada ikhtiyaariga ah
Waa run in internetka waxaan ka heli karnaa a tusaalooyin aan dhammaad lahayn iyo tusaalooyin ku saabsan waraaqaha iscasilaadda ikhtiyaariga ah. Iyo inkasta oo waxa ugu fudud ay tahay uun inaad soo degsato mid ka mid ah tusaalooyinkan oo aad ka buuxiso xogteenna, hadana waxaa inta badan lagugula talinayaa inaad adigu shakhsi ahaan qorto warqadda. Tan awgeed waxaa jira talooyin taxane ah oo ay tahay inaad raacdo, si aad ugu qorto warqad wanaagsan.
Talada ugu horreysa ee ay tahay inaad raacdo, iyo qalad aad u badan, ayaa ah in Waraaqdu waa inay ahaataa mid toos ah, kooban oo cad. Waana in kastoo ay suurta gal tahay inaad waxbadan ka baratay shaqadaada oo aad bogaadisay caawimada lagu siiyay intaad joogtay, ujeedada warqadani maahan inaad ku mahadnaqdo una soo bandhigto hambalyadaada.
Marka maskaxda ku hay in warqaddu waa inay kooban tahay Laba qodob, tan hore ayaa ah inaad qaadatay go'aanka ah inaadan sii wadin shirkadda, tan labaadna waa taariikhda aad qorsheyneyso inaad tan sameyso.
Tilmaamaha labaad ayaa ah, intaad toos u noqon lahayd, iyadoon loo eegin inay ahayn shaqadii riyada ee aad qabatay, waa inaad si rasmi ah uga dhigtaa. Taasi waa sababta ay kugula talineyso inaad si fudud ugu sharaxdo sababaha aad u qaadatay go'aanka ka bixitaanka shirkadda. Laakiin sidoo kale waxaa si weyn laguugula talinayaa, inkasta oo sababahan ay ku jiri doonaan warqadda, inaad si shakhsi ah ugu muujiso cidda ay khuseyso.
Haatan aan u gudubno falanqeynta nuxurka ay ahayd inuu warqadani lahaado. Marka hore waxaan ka helaynaa taariikhda qeybta kore ee midig ee warqadda, taariikhdan waa inay u dhigantaa ta aad ku geyneyso warqadda qofka masuulka ah. Macluumaadka labaad ee ay tahay inaad ku darto ayaa ah magaca qaataha warqadda sadarka xiga bidix fog.
Xogta xigta ee ay tahay inaad ku darto waa booska ay warqad diraha, tan si loo kordhiyo qaab dhismeedka. Khadadka soo socda waa inaad ku qortaa magaca shirkadda aad iska casishay, ugu dambeyntiina waa inaad gashaa cinwaanka isla shirkaddaas (in kasta oo macluumaadkani dhab ahaan uu ikhtiyaari yahay, macluumaadkani wuxuu ku darayaa qaab rasmi ah warqadda).
Mar dambe waa inaad qortaa qaybta ugu muhiimsan ee warqadda, oo ah jirka. Waxaa lagugula talinayaa inaad kubilaabato salaan rasmi ah oo kuhadleysa qofka warqada helaya, oo ay ku xigto sababta warqada lagu sheegay, tan waa inaad ku sharaxdaa inaad qaadatay go'aanka sababi kara ka noqoshadaada iskaa ah shirkada ka hadleysa, ka dibna aad tilmaameyso waxa waa maalinta ugu dambeysa ee aad qorsheyneyso inaad ka shaqeyso shirkadda. Ugu dambeyntiina, waa inaad ku dhammaataa magacaaga iyo saxiixaaga.
Fikrad ahaan, markaad shaqada katagayso, waxaad kuqabtaa habka ugu fudud ee ugu fudud ee suurtagalka ah, maxaa yeelay tani waxay sahlaysaa shirkadda iyo adiguba shaqaale ahaan Tan awgeed waxaa lagugula talinayaa inaad bixiso ogeysiis iscasilaad ah. In kasta oo ay ikhtiyaari tahay inaad ixtiraamto ogeysiiska iyo in kale, waa inaad ogaataa haddii aadan ixtiraamin, inay jirto suurtagal inay shirkaddu kugu ciqaabto iyadoo laga jarayo maalmaha aadan horay u siinin.
Marka la eego waxa kor ku xusan, waa inaad tixgelisaa tan ugu fiican inay tahay qorshee iscasilaadaada sida ugu macquulsan; Tani waxay faa'iido u yeelan doontaa shirkadda iyo idinkaba. Ugu dambeyntiina, marka la eego ereyga, waxaa ugu habboon in la caddeeyo in maalintaada shaqo ee ugu dambeysa ay tahay maalin-shaqo, maaddaama, haddii aad doorato Sabti ama Axad ay tahay taariikhda bixitaanka, shirkaddu waa inay lacag ku siisaa qayb ka mid ah Sabtida marka lagu daro inay ku hayso firfircoon Axadda, taasina maahan wax run ahaantii u fudud shirkadda.
Mid ka mid ah su'aalaha ugu caansan ayaa ah yaa habboon warqad ka noqoshada ikhtiyaari ah, waana inay jiraan fursado dhowr ah oo aan ku fekeri karno marka hore; madaxeena tooska ah, qof masuul ka ah shaqaalaha, iwm.
Jawaabtu way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran shirkadda la sheegayo, laakiin sida ay u kala mudan yihiin waa sida soo socota: haddii ay jirto a waaxda shaqaalaha ee shirkadda, waxa ugu fiican ayaa ah inaad toos ugu dhiibto iyaga; inta badan waxaa jira qof mas'uul ka ah waaxda aad ka shaqeyso marka kani waa midka ay tahay inaad aado.
Haddii ay dhacdo in shirkadda aad ka shaqeysid aysan jirin Waaxda HR, Waxa ugu badan ee lagugula taliyay waa inaad shaqsi ahaan ugu wareejiso maamulahaaga tooska ah. Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad markaad gaarsiiso warqadaada inaad codsato rasiid warqad la sheegay, waa inaad sidoo kale naftaada u sheegtaa waxa talaabooyinka xiga ay awoodaan inay sameeyaan iscasilaada, taas oo kugula socodsiin doonta habka dheecaanka iyo gudbinta dukumiintiyada .
Xiriir afka ah habka joojinta ikhtiyaariga ah
Waa muhiim in inta aad ku guda jirto hawsha iscasilaada aad ilaaliso xiriir wanaagsan si aad ugu fududeyso howsha oo dhan. Marka halka warqad iscasilaad ikhtiyaari ah aad ayey muhiim ugu tahay howshan, sidoo kale waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad raacdo tilmaamaha isgaarsiinta ee soo socda ee ku saabsan habka iscasilaada
Marka hore waa inaad hubisaa go'aanka aad qaadanaysid, sidaa darteed, haddii ay horeyba u ahayd go'aan la gaadhay, hubi inaad la xiriirto maamulahaaga tooska ah marka hore; Tanina waa wax ay tahay inaad sameyso maxaa yeelay qaabkan waxaad ku diyaarin kartaa howsha kala guurka oo aad uheli doontid qofkii beddeli lahaa booskaaga.
Intaas waxaa sii dheer, qorshaha ku-meelgaarka waxaa ku jiri kara taageeradaada tababarka qofka ku xiga ee kaa qaadaya booskaaga.
Haddii shaqadaadu aysan ahayn jawi shaqo oo wanaagsan, ama haddii xiriirka aad la leedahay maamulahaaga uusan ahayn kan ugu habboon, waxa ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad isu diyaariso inaad awood u yeelato inaad wajihi karto xiriir afka ah oo ku saabsan joojinta howlaha shirkadda; Taasi waa sababta ay tahay inaad degganaato oo aad raadiso ereyada ugu fiican ee aad kula xiriiri karto go'aankaaga, adigoo marwalba ixtiraama oo aad iska ilaaliso iska horimaadyada oo howsha iscasilaadda adkeynaya.
Si aad u diyaariso bixitaankaaga waa inaad tixgelisaa 4-ta qodob ee soo socda:
Marka hore waa inaad ka feejignaataa oraahda sababaha aad isu casishay, sidan ayaad awoodi doontaa inaad ku soo bandhigto doodo adag oo ku saabsan sababta go'aankaaga, iyo markii aad sii adkeysato sii ahaantaada, ayaa ka sii fiican si hawsha iscasilaadda si dhab ah looga fiirsado .
Arrinta labaad, waa inaad tixgelisaa in dabeecaddaadu tahay inay fiicnaato, marka markasta oo aad adigu naftaada wax ugu sheegto, hubi inaad ku mahadsan tahay waqtiga iyo waliba fursadda ay shirkaddu ku siisay inaad khibrad ku hesho. Sidan ayaad markasta albaabada shirkadda u furan kartaa.
Tilmaamaha saddexaad ayaa ah inaad had iyo jeer iskaashi joogto ahaato; Tani waxay ka dhigan tahay, in kasta oo mas'uuliyadahaagu yaraanayaan, taageeradaada ayaa laga yaabaa in loo baahdo inay hawsha ku sii wadato sidii caadiga ahayd. In kasta oo ay tahay inaad hubiso in wadashaqeyntu ay ahaato mid ka socota labada dhinac.
Ugu dambeyntiina, waa inaad tixgelisaa inaad marwalba maskaxda ku hayso taariikhda bixitaanka ee si fiican loo go'aamiyay, si aad si cad ugula xiriirto mar walbana aad u caddeyso adeegsiga howlahaaga si rasmi ah u dhammaanayso.
Dib u eegista maqaalka waa inaad tixgelisaa taas warqadda iscasilaadda iskeed ah waa inay noqotaa mid kooban oo kooban, inaadan bixin macluumaad ka badan inta lagama maarmaanka u ah, taasi waa, waa inaad sharraxdo sababta aad u go'aansatay inaad is casisho waana inaad sidoo kale caddeysaa taariikhda aad ka tagi doontid xilalkaaga gebi ahaanba.
Sidoo kale, waxaa lagugula talinayaa inaad marwalba ilaaliso wada hadalka hadalka oo aad ufiican, markastana aad ilaaliso nidaamka iyo xirfad ahaanta. Marka had iyo jeer maskaxda ku hay inaad ilaaliso xiriirka aad la leedahay maamulahaaga, waaxda shaqaalaha, shaqaalaha aad la shaqayso, iyo waliba qofka ku xigi doona mustaqbalka haddii ay dhacdo in lagaa codsado taageero si aad u tababarto shaqaalaha cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Warqad iscasilaad ikhtiyaari ah
Marka la eego, shirkadaha waaweyn, gaar ahaan shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah, waxay u jeesteen dhinaca tiknoolajiyadda iyaga oo ka door bidaya shaqaalahooda shaqaalaha, iyagoo waqtiga ilaalinaya isla markaana u keenaya natiijooyin wanaagsan ururada shaqaalaysiinta hibada, tanina, dabcan, waxay saameyn togan ku leedahay waxqabadka shirkadda shirkad ahaan iyo guud ahaanba.
Kooxda qorista xulafada ugu weyn ayaa shaki la'aan ah qorista iyo xulashada barnaamijyada. Iyada oo ay ku jirto, hawlaha hawlgalku waa iswadayaan, halka shaqaaluhu samayn karaan falanqaynta astaamaha iyo shaqada istiraatiijiyadda qorista. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo loo marayo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed ee HR, waa suurtagal.
Guryaha oo ciriiri ah
Burburka suuqa saamiyada dhamaadka sanadka